Dowladda Mareykanka ayaa dooneysa in Cilaaqaad Millitari ay la yeelato Shiinaha – XOGMAAL.COM
Dowladda Mareykanka ayaa dooneysa in Cilaaqaad Millitari ay la yeelato Shiinaha
Mattis ayaa waxaa uu u safray wadanka Singapor si uu uga hortago in Shiinuhu uu aarsi ka sameeyo cune qabateeyn mareeykanku uu dhawaan kusoo rogay Qayb ka mid ah Military-ga Shiinaha, wuxuuna Wasiirka Difaaca ee Shiinaha Wei Fenghe.
By Soomaaliya	 On Oct 18, 2018
Xoghayaha Arrimaha Difaaca ee Mareeykanka Jim mattis ayaa shir heerkiisu sareeyo waxaa uu la yeeshay Dhigiisa Shiinaha kasi oo dhacay Maanta oo khamiis ah, iyadoo MAreeykanku uu Doonayo in uu cilaaaqaad military la sameeysto Shiinaha.
Dowladda Shiinaha ayaa cilaaqaad military waxaa ay yeelatay WadankaRuushka oo ay kala qayb gashay dhoolotus military oo Bil kahor.
Waxaa hadda liita xiriirka udhexeeya military-ga Mareeykanka iyo Midka Shiinaha waxaa jirta Cune qabateyn uu Mareeykanku saaray Qayb ka mid ah military-ga Shiinaha kadib markii Shiinuhu Hubka Difaaca Hawada kasoo Iibsada Ruushka.
Madaxweynaha Galmudug muxuu kala hadlay Saraakiisha Ciidanka Mudug?